Reward Sensitivity သည် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး Erotic Stimulus Processing (2013) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013; 8 (6): e66940 ။
ဇွန် 28, 2013 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0066940
ဗစ်တာ Costumero,* Alfonso Barrós-Loscertales, Juan Carlos Bustamante, Noelia Ventura-Campos, Paola Fuentes, ပက်ထရီရှာ Rosell-Negreနှင့် CésarÁvila
Hengyi Rao, အယ်ဒီတာ
Grey ၏အားဖြည့် sensitivity သီအိုရီမှအမူအကျင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုစနစ် (BAS) သည်အာရုံကြောနှင့်ဆိုင်သော ဦး နှောက်toရိယာများနှင့်ဆက်နွယ်သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည့်အာရုံခံဆဲလ်မဟုတ်သောအပြုအမူစနစ်ဖြစ်သည်။ Grey ၏သီအိုရီအရအကျိုးရှိသည့် ဦး နှောက်ofရိယာ၏အကျိုးကျေးဇူးကို BAS နှင့်သက်ဆိုင်သောစရိုက်များက modulated လုပ်သည်။ ဤအယူအဆကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တန်းသားများသည်၎င်းတို့၏ပုံပန်းသဏ္predာန်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သောအရူးနှင့်ကြားနေဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့် fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်ကွဲလိင်ခြားသူအမျိုးသား ၄၅ ဦး သည် BAS နှင့်သက်ဆိုင်သောစရိုက်များကိုတိုင်းတာရန် Sensitivity to Reward စကေး (အထိခိုက်မခံခြင်းမှအပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုရှိခြင်းမှဆုလာဘ်မေးခွန်းလွှာအထိ) ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရလဒ်များအနေဖြင့်လက်ဝဲ orbitofrontal cortex၊ ဘယ်ဘက် insula နှင့် right ventral striatum ရှိလိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်စဉ်အတွင်း Reward မှ Sensitivity ရမှတ်များသည် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် BAS အကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုလှုံ့ဆော်မှုများကိုပြုပြင်စဉ်ကာလအတွင်း dopaminergic system သည် BAS ၏အာရုံကြောအလွှာအဖြစ်ငွေကြေးနှင့်အစားအစာကဲ့သို့သောအခြားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုဖော်ထုတ်သောယခင်အစီရင်ခံစာများ၏ကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
အဆိုပါအားဖြည့် sensitivity ကိုသီအိုရီ (RST) အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurobehavioral စနစ်၏တည်ရှိမှုအဆိုတင်သွင်း -။ ဤစနစ်ကိုအမူအကျင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုစနစ် (BAS) ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာလူတစ် ဦး ချင်းအားလိင်နှင့်အစားအစာစသည့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆုများရရှိရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ BAS ၏ဇီဝအလွှာ dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်ပိုင် ဦး နှောက်ဒေသများပါဝင်သည်ထင်နေသည် အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ,ရိယာ, substantia nigra, Basal ganglia သို့မဟုတ် amygdala အဖြစ် subcortical အဆောက်အ ဦ များနှင့်ထိုကဲ့သို့သော orbitofrontal cortex (OFC), medial prefrontal cortex (PFC) နှင့် anterior cingulate cortex (ACC) အဖြစ် prefrontal ဒေသများပါဝင်သည် , .
RST ၏အဆိုအရ BAS ဓာတ်ပြုခြင်းသည်ဆုလာဘ် cue (သို့) အားဖြည့်ခြင်း၏ appetitive value ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်တိုးလာပြီးတစ် ဦး ချင်းစီအကြားကွဲပြားသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီဆုလာဘ် sensitivity ကို၏အစီအမံအပေါ်ပိုမိုအားကောင်းတဲ့အစာစားချင်စိတ်အေးစက်ရှိသည်နှင့်နိမ့်ဂိုးသွင်းထက်ပိုမိုချက်ချင်းဆုလာဘ်ပိုနှစ်သက်ကြောင်းတစ်သမတ်တည်းအတည်ပြု , ။ RST နှင့်အညီယခင် fMRI လေ့လာမှုများသည်ဆုလာဘ်များကိုတုန့်ပြန်သည့်အခါကွဲပြားခြားနားသော BAS-related ဒေသများရှိဆုလာဘ်အာရုံခံစားမှုနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဥပမာ Beaver et al ။ (2006) ပြသခဲ့သည်အစားအစာများ၏ပုံများကိုတုံ့ပြန်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအပြုသဘော midbrain, ventral striatum (VS) နှင့် OFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ပြသခဲ့သည် ။ ထို့အပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများသည်ဆုချီးမြှင့်မှုနှင့်အားဖြည့်ပေးသူများအားထုတ်နုတ်စဉ်နူကလိယ accumbens (NAcc)၊ -။ ခြုံငုံ။ ပြောရလျှင် fMRI ၏ရလဒ်များသည် RST နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဆုချီးမြှင့်မှု sensitivity သည်ပိုက်ဆံ (သို့) အစားအစာကဲ့သို့သောအားဖြည့်ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါအကျိုးကျေးဇူးများကို ဦး နှောက်ofရိယာ၏တုန့်ပြန်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဆုလာဘ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အာရုံကြောကွဲပြားမှု RST ၏မူဘောင်များတွင်လျော့နည်းစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရပိုမိုထိရောက်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်ခံစားခွင့်သည်လူတစ် ဦး အားလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများပိုမိုများပြားစွာဆက်ဆံရန်၊ မီဒီယာရှိလိင်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုစပ်စုလိုစိတ်နှင့်လိင်စိတ်ကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားစေနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ -။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည် ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများမှအစပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ် endogenous factor ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက fMRI လေ့လာမှုများသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုတွင်ပါဝင်သော ဦး နှောက်နေရာများကိုလေ့လာရန်ခေါ်ဆောင်သွားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည် , ။ ဤလေ့လာမှုများကလိင်မှုနှိုးဆွမှုတွင် BAS နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒေသများဖြစ်သော OFC၊ medial PFC, ACC, VS နှင့် amygdala စသည့်နယ်ပယ်များတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်စစ်ဆေးမှုများတွင်ပါဝင်သော ဦး နှောက်နေရာများကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, OFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုဟာအရေးပေါ်သတိထားသင်တန်းသားများကိုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်သရုပ်ပြခဲ့သည် ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမကယခင်လေ့လာမှုများမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့် ဦး နှောက် activation အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါပြီ။
ဆုလာဘ် sensitivity နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများပြုပြင်ခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော fMRI လုပ်ငန်းကိုအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ရန်  အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၏ 50% သို့မဟုတ် 100% ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြပြီးနောက် erotic နှင့်ကြားနေဓာတ်ပုံများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာ။ အဆိုပါ RST နှင့်အညီကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုနှင့်မျှော်လင့်နှစ် ဦး စလုံးစဉ်အတွင်း BAS -related ဒေသများရှိပိုမိုအားကောင်း activation ယူဆ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွေကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက် BAS-related ဒေသများကြောင့် cue နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်အကြားသာ။ ကြီးမြတ်အရေးပေါ်မှကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် 100% ထက် 50% ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုများအတွက်သာ။ ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုပြသလိမ့်မည်ဟုတွေးဆ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် BAS နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နယ်မြေများတွင်လှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်ခြင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပြီး၊ ပါဝင်သူများနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုပြုပြင်စဉ်ကာလအတွင်းအကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်။
လိင်ကွဲယောက်ျားလေးဆယ့်ငါး ဦး (Mအသက်အရွယ် = 24.08, SD = 3.71, ပညာရေး၏အနှစ် = 13.27 ± 2.93) ဒီလေ့လာမှုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူအားလုံးသည်အပြစ်ပေးခံရမှုအပေါ်အာရုံခံနိုင်မှုနှင့်ဆုလာဘ်မေးခွန်းလွှာကိုစာနာခြင်း (SPSRQ) ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။  ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုအတိုင်းအတာသည်။ ပါ ၀ င်သူသုံး ဦး သည် (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုကြည့်ပါ) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစစ်ဆေးမှုမှဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် Sensitivity to Reward (SR) စကေးအပေါ်အဖြေမရသောအချက်နှစ်ချက်ထက်ပိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ SR စကေးအပေါ်ပျမ်းမျှရမှတ် 12.04 (SD = 4.48, အကွာအဝေး: 2-24, N = ၄၂) ရမှတ်များပုံမှန်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးသည် (Kolmogorov-Smirnov test: D = .12, p> .11); ထို့ကြောင့်ဤနမူနာ၏ရမှတ်များသည်ယခင်လေ့လာမှုများမှရရှိသောရလဒ်နှင့်ဆင်တူသည် -။ လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သူမျှ ဦး နှောက်ဒဏ်ရာအနာတရမရှိခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်း၊ ယခင်က DSM-IV ၀ င်ရိုးတန်း I သို့မဟုတ် II ရောဂါများသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သည့်သမိုင်းကြောင်းမရှိခဲ့ပါ။ ပါ ၀ င်သူများသည်ဤလေ့လာမှုတွင်မပါ ၀ င်မီကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားစာကို ပေး၍ သူတို့၏ပါ ၀ င်မှုအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သည် ဤလေ့လာမှုကို Castellon ရှိ Universitat Jaume I ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
အသုံးပြုသောတာဝန်မှာမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆုတ်ယုတ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသောအစောပိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ဖြစ်သည် ။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီတွင်သတိပေးချက် (X, O, or?) ပါဝင်ပြီး ၁ စက္ကန့်သို့တင်ပြပြီးနောက် ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ စက္ကန့်တို့၏အမျိုးမျိုးသောကြားခံအတွက်တင်ပြသည့် fixation point တစ်ခုပါဝင်သည်။ 1 s အတွက်။ အစာစားချင်စိတ်စမ်းသပ်မှုများအတွက် X အမှတ်အသားကိုအမြဲတမ်းခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံ (Ep100%) ။ ကြားနေစမ်းသပ်မှုများအတွက် O cue ကိုအမြဲတမ်းကြားနေရုပ်ပုံ (Np100%) ။ စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးမှုစမ်းသပ်မှုများအတွက်မေးခွန်းအမှတ်အသားကိုအချိန်ကာလ၏ထက်ဝက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများ (Ep50%) နှင့်အခြားတစ်ဝက်ကြားနေရုပ်ပုံ (Np50%) ။ X နှင့် O အချက်များသည်အမြဲတမ်း erotic ဓာတ်ပုံများနှင့် neutral ပုံများနောက်သို့လိုက်နေကြောင်းသင်တန်းသားများကိုသတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ မေးခွန်းအမှတ်အသား cue သည် erotic သို့မဟုတ် neutral ဓာတ်ပုံများနောက်တွင်ပါခဲ့သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီသင်တန်းသားများသည်စမ်းသပ်ထားသည့်အစုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သောနှင့်ကြားနေပုံရိပ်များကိုအသုံးပြုပြီး ၉ မိနစ် ၁၂ မှစံနမူနာယူထားရသည်။ သင်္ကေတအားလုံးသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးနောက်ခံအနက်ရောင်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုပုံစံကိုနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးထပ်မံတင်ပြခြင်းမရှိစေရန်တရားရုံးအမိန့်ကိုအတုအယောင်ခွဲခြားထားသည်။ အဆိုပါ intertrial ကြားကာလ 9, 12, 6, 7, 8 s အကြားကွဲပြားနှင့် cue နှင့်ရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုနှစ် ဦး စလုံးအပြီး pseudorandomized ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းကာလနှစ်ခုလုံးတွင် hemodynamic တုန့်ပြန်မှုအားခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအတွက်မတည်ငြိမ်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဤကြားကာလသည်ရည်ညွှန်းမှု၏စံနမူနာကိုအခြေခံသည်။ ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုအရှည်သည် ၁၈ စက္ကန့်နှင့် ၁၄ မှ ၂၂ အထိကွဲပြားသည်။
အလုပ်လုပ်သောပြေး ၃ ခုရှိသည်။ တစ်ခုစီတွင်ခေါ်ဆောင်သွားစမ်းသပ်မှုရှစ်ခု၊ ကြားနေစမ်းသပ်မှုရှစ်ခုနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသည့်စမ်းသပ်မှုရှစ်ခု (စုစုပေါင်း - ၂၄ အပေါင်း၊ ၂၄ ကြားနေနှင့် ၂၄ - မရေရာဒွိဟ) ပါဝင်သည်။ အလုပ်လုပ်သောစကင်တစ်ခုချင်းစီသည် ၁၀ စက္ကန့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ၇ မိနစ်၊ ၇ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့်နှင့် ၇ မိနစ် ၃၀ စက္ကန့်စီအသီးသီးရရှိသည်။ သင်တန်းသားများကိုအကြား Runs ကျပန်းခဲ့ကြသည်။ fMRI စမ်းသပ်မှုအတွင်းတုန့်ပြန်မှုအကွက် (NordicNeuroLab, Bergen, Norway) ကို အသုံးပြု၍ သင်တန်းသားများကိုပုံတစ်ပုံချင်းစီအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လက်ညှိုးနှင့်ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုဓာတ်ပုံကြည့်ရှုစဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသေချာစေရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည် ။ သင်တန်းသားများမှစမ်းသပ်ချက်ပါရာဒိုင်း (အထီးကျန်မှုနှုန်း ၆ ခု၊ စုစုပေါင်း) အထီးကျန်ခြင်းတွင် ၁ ခုတင်ဆက်မှုလက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ဆက်မှုများကိုပြန်လည်ဖြေကြားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ = 18) တရားမဝင်သောဖြစ်ရပ်များအဖြစ်။ ဤလှုံ့ဆော်မှုသည်ပါဝင်သူများ၏ cue နှင့်ဓာတ်ပုံလှုံ့ဆော်မှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းကာလအတွင်းလှုံ့ဆော်မှုတုန့်ပြန်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ .
fMRI စမ်းသပ်မှုအတွင်းပါဝင်သူများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစုစုပေါင်းမှဓာတ်ပုံ ၇၂ ခု (ခေါ်ဆောင်သွား ၃၆ ခုနှင့်ကြားနေ ၃၆ ခု) ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်  Resolution 800 × 600 Pixels ဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထက်မကပြသခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေစံချိန်စံညွှန်းအပေါ်အခြေခံသည် အမြင့်ဆုံးသောတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီလိင်စိတ်နိုးထစေသောဓာတ်ပုံများ (M = 7.55, SD = 1.54) နှင့်အမြင့်ဆုံး arousal ratings (M = 6.97, SD = 2.06) အဓိကအားဖြင့်စုံတွဲများနှင့် undressed အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံများပါဝင်သောခေါ်ဆောင်သွား appetitive အစုံ, ပါဝင်သည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ကြားနေပုံများ (ဥပမာ - အိမ်သုံးပစ္စည်းများ) တွင်ကြားနေတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ရှိသည် (M = 5.03, SD = 1.31) နှင့်အနိမ့်နှိုးဆော်သံ ratings (M = 2.88, SD = 2.03) ။ ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားလေ့လာမှုများနှင့်မတူဘဲ , ကျွန်ုပ်တို့၏ကြားနေအခြေအနေအတွက်လူသားများ၏လိင်စိတ်မပါသောရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့မသုံးခဲ့ကြပါ။ ဤရွေ့ကားလှုံ့ဆော်မှုထိုကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနား variable တွေကိုပါဝငျသညျ , ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္ဍာန် , ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးအဘိုးပြတ် , သော dopaminergic စနစ်အတွင်း ဦး နှောက်ဒေသများရှိလုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတုန့်ပြန်သော ဦး နှောက်areasရိယာများကိုဖျက်စီးရန်မဟုတ်ဘဲကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုပုံရိပ်များနှင့်တုန့်ပြန်မှုများကိုမည်သို့လေ့လာရန်ဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ အခွအေနေ။
ပုံရိပ်အား 1.5 T T Siemens Avanto (Erlangen, ဂျာမနီ) MRI စကင်နာဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ function ကိုပုံရိပ်တွေတစ် ဦး gradient ကို - ပဲ့တင်သံ T2 * အလေးချိန်ပဲ့တင်သံ - ပြို MR sequence ကို (TR = 2000 ms, TE = 30 ms, matrix ကို = 64 × 64 × 30, voxel အရွယ်အစား = 3.5 မီလီမီတာ3, ထောင့်လှန် = 90 °, အချပ်ကွာဟမှု = .5 မီလီမီတာ) ။ ကျနော်တို့ hippocampus မှအပြိုင် oriented interleaved axial ချပ် 30 ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ပထမပြေးသည် ၂၁၃ ခု၊ ဒုတိယပြေးအတွက် ၂၁၈ ခု၊ တတိယပြေးတွင် ၂၁၄ ခုရှိသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ MR ပာမတိုင်မီက high-resolution T213-weighted ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ sequence ကို (TR = 11 ms, TE = 4.9 ms, လှန်ထောင့် = 90 °, voxel အရွယ်အစား = 1 × 1 × 1 မီလီမီတာ) ။
ပုံရိပ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို SPM8 (Wellcome Trust Center for Neuroimaging, London, UK) ကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ equilibration သက်ရောက်မှုများကိုခွင့်ပြုရန်ပထမ ဦး ဆုံး Scan နှစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုများ၏ preprocessing တွင် ArtRepair toolbox ကို အသုံးပြု၍ ဆူညံသံစစ်ခြင်းပါဝင်သည်။http://cibsr.stanford.edu/tools/human-brain-project/artrepair-software.htmlပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏မြင့်မားသော resolution ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုမှခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမှပုံမှန်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ယူပြီးနောက်အချပ်အပိုပစ္စည်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း (စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်)၊ အချပ်အချိန်ကာလပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရွေ့လျားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပိုပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ နှင့် 8-mm (FWHM) Gaussian kernel နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့။
preprocessing ပြီးနောက်, ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်အခြေအနေများအကြားသိသိသာသာ hemodynamic ပြောင်းလဲမှုများကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် ။ ပထမအဆင့် (အတွင်း - ဘာသာရပ်များ) ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက်ပါဝင်သူတစ် ဦး စီ၏ preprocessed အချိန်စီးရီးသည် hemodynamic response function နှင့်၎င်း၏ယာယီအနကျအဓိပ်ပါယျကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့စိတျဝငျစားမှုအခွအေနကေိုပုံစံတကျခဲ့သညျ။ ရှစ် regressors တွေကို (X, O နှင့်?), ရလဒ်များမော်ဒယ်များအတွက်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် (။100%, np100%, Ep50%နှင့် Np50%) နှင့် fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်။ ထို့အပြင်ကျန်နေတဲ့ရွေ့လျားမှုကိုမော်ဒယ် ၆ ချင့်ချိန်ညှိတဲ့အရာဟာလည်းစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိတဲ့ regressors တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ အခ်ါ autocorrelations များသည် high-pass filter မှတဆင့် 1/128 Hz ၏ကြိမ်နှုန်းကို ဖြတ်၍ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်အုပ်စု၏ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုထုတ်ဖေါ်ဖို့ဒုတိယအဆင့် (ကျပန်း - သက်ရောက်မှု) တပြင်လုံးကို - ဦး နှောက် voxel- ပညာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ anticipatory ကာလအဘို့, တနမူနာ t- စမ်းသပ်မှုများကိုဆန်းစစ်ခြင်းသည်ကြားနေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်မရေရာသည့်အချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန် BOLD အချက်ပြကွဲပြားမှုများကိုရရှိရန်ပထမအဆင့်ဆန်းစစ်မှုများ (X> O နှင့်?> O) မှ BOLD နှိုင်းယှဉ်ချက်များခန့်မှန်းချက်များကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်တွဲ t စမ်းသပ်မှုကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးများအကြားရဲရင့်သောအချက်ပြမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ရလဒ်ရလဒ်အနေဖြင့် ANOVA သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကွဲပြားမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကြားနေရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအားကွဲပြားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်နှစ်လမ်း (အခြေအနေ (erotic၊ ကြားနေ) x ဖြစ်နိုင်ခြေ [၁၀၀%၊ ၅၀%)) ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများအကြားအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကို ဦး နှောက်ဒေသများလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ် ဦး တံခါးခုံမှာပြုမိခဲ့သည် p<.05 မိသားစုပညာအမှား (FWE) စပျစ်သီးပြွတ်တညျ့။ အဆိုပါ FWE ဆုံးမခြင်း၏ voxel- ပညာတံခါးခုံကိုလျှောက်ထားရရှိသောခဲ့သည် p<.001 အမှားပြင်ခြင်းနှင့် 22 တဆက်တည်း voxels ၏နိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာတံခါးခုံ။ Resting-State fMRI Data Analysis Toolkit (REST) ​​ကိုအသုံးပြုပြီး Monte Carlo Simulator များကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသောတံခါးခုံကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ http://www.restfmri.net).
မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အခြေအနေများအတွင်း SR ရမှတ်များနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ၏ယခင်လေ့လာမှုများကိုအောက်ပါ , , ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏ SR ရမှတ်များနှင့်တိကျသော ဦး နှောက်areasရိယာများတွင်လုပ်ဆောင်မှု၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများကိုဆက်နွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဆုလာဘ် sensitivity နှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် dopaminergic system နှင့်သက်ဆိုင်သည့်inရိယာများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုပမာဏ (VOIs) များကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဦး နှောက်၊ striatum, amygdala, medial PFC, OFC နှင့် insula အပါအဝင် , ။ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး၏ voxel ပညာရှိဆန်းစစ်ခြင်းများ၌အရေးပါမှုကိုပြသသောအများဆုံး dopaminergic ofရိယာများ၏ VOIs များကိုသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ VOI တိုင်းသည်အမြင့်ဆုံး voxel ပေါ်တွင်ဗဟိုပြုသည့် ၈ မီလီမီတာအချင်း ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး စီအတွက် VOI အတွင်းရှိတက်ကြွသော voxels အားလုံး၏အတိုကောက် BOLD ခြားနားသောခန့်မှန်းချက်များကိုတွက်ချက်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤတန်ဖိုးများကို SR ၏ရမှတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားပြီး၊ ယခင်သက်သေအထောက်အထားများအရဒီ variable သည် dopaminergic system အတွင်းရှိ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွယ်ကြောင်းပြသသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်အရွယ်ကို covariate အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ , ။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတံခါးခုံကိုသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p<.05 Bonferroni FWE အားတည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ ဦး စားပေးရွေးချယ်ထားသောတံခါးခုံကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲဝေလိုက်သည် p<.05 ဖျော်ဖြေစမ်းသပ်မှုများ၏အရေအတွက်အားဖြင့် (k = ၉; လျော့နည်း than.9 လျှင်သိသိသာသာအဖြစ်စာရင်းအင်းအဆင့်ဆင့်တည်ငြိမ်သောရလဒ်များကိုကြည့်ပါ) ။
ပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အပြုအမူဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ရန်အတွက်ကြိုတင်စောင့်ကြည့်သည့်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှုများ၏ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုအချိန်များ (RTs) သည်သီးခြားစီမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ တွဲပါတယ် t စမ်းသပ်မှု anticipatory တွေကို (X>?, X> O, နှင့်?> အို) အကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုလေ့လာထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်ကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုလေ့လာရန်အတွက် ANOVA အားထပ်မံတိုင်းတာမှုများ (အခြေအနေ (erotic၊ neutral) x ဖြစ်နိုင်ခြေ [၁၀၀%၊ ၅၀%)) ကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ RT အပေါ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသက်ရောက်မှုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကြားနေအခြေအနေများအတွက် RTs ကိုထိန်းချုပ်, erotic အခြေအနေများ (cues နှင့်ပုံများ) အတွက် SR ရမှတ်များနှင့် RTs အကြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးမှုများကိုပြသသည့် RT များကိုနှေးကွေးစေခဲ့သည်။M? = 458.4 ± 116.2 ms) ခေါ်ဆောင်သွားအချက်များ (ထက်)MX = 445.22 ± 126.64 ms, t = 2.85, p = .007) နှင့်ကြားနေတွေကို (MO = 436.8 ± 139.7 ms, t = 3.67, p = .001) ။ ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်ကြားနေမှုဆိုင်ရာများအတွက် RTs သည်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။p> .05) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုံရိပ်တွေအတွက် RTs ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (MEp100% = 388.5, 128.9 ± MNp100% = 360.2, 99.1 ± MEp50% = 389.6, 125 ± MNp50% = 374.8 ± 121.8) အခြေအနေ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသ, F(1, 44) = 11.18, p = .001, ကြားနေပုံများထက်ခေါ်ဆောင်သွားဘို့နှေးကွေး RTs ညွှန်ပြ။ ဤရလဒ်သည်သင်တန်းသားများသည်ကြားနေပုံများထက်လိင်စိတ်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ ဤရလဒ်များကိုပါ ၀ င်သူများအားဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ရန်ညွှန်ကြားထားခြင်းမဟုတ်ဘဲရည်ညွှန်းမှုစံနမူနာအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အာရုံကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြေကြားရန်ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤရလဒ်များကိုသတိကြီးစွာ ထား၍ ဘာသာပြန်သင့်သည်။ ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် SR ရမှတ်များနှင့် RT များအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
လုံးလုံး - ဦး နှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့တုံ့ပြန်မှုနှစ် ဦး စလုံးအတွက် BAS -related ဒေသများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုပြသခဲ့သည်။ -45, 38, -14: anticipatory လက်ဝဲ OFC အတွက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ (x, y, z) သရုပ်ပြ; z = 3.73, k = 25) ကြားနေအချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကို၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း။ ထို့အပြင်လက်ဝဲ anterior insula တွင်လှုပ်ရှားမှု (x, y, z: -42, 20, 1; z = 4.11, k = ၂၅) စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ပုံ 1) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်မရေရာမှုများများကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါသိသာသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိခဲ့ပါ။
anticipating cue အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။
သင်တန်းသားများသည်ကြားနေရုပ်ပုံများနှင့်မတူဘဲခေါ်ဆောင်သွားသည့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအခါရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုကာလအတွင်း cortical နှင့် subcortical ဦး နှောက်areasရိယာများသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤဒေသများတွင် OFC, medial PFC, နှစ် ဦး နှစ်ဖက် PFC, ACC, ယုတ်ညံ့ယာယီ cortex, parietal cortex, occipital cortex, VS, amygdala, thalamus နှင့် midbrain ပါဝင်သည်။ ပုံ2နှင့် စားပွဲတင် 1 အသေးစိတ်အတွက်) ။ ဤareasရိယာအများစုသည်ကြီးမားသောtwoရိယာနှစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်နှင့်ခြေလက်များthatရိယာများပါ ၀ င်သည့် anterior cluster နှင့် occipitotemporal နှင့် parietal ဒေသများပါ ၀ င်သည့် posterior cluster ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အခွအေနေနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်နှစ်နိုင်ငံ precuneus အတွက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (left x, y, z: -6, -67, 37; z = 4.09, k = ၂၅; ညာဘက်က x, y, z: 25, -15, 58; z = 3.93, k = ၃၄) ။ ပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် erotic အခြေအနေတွင်ပုံသဏ္conditionာန်နိမ့်ကျမှုနှင့်အတူဓာတ်ပုံများတွင်နှစ်ဖက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (။50%) ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေ (ep ။ ) ထက်100%).
ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု။
ကြားနေရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Erotic ပုံရိပ်တွေကိုတင်ပြစဉ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုတိုးပွားလာသော ဦး နှောက်ဒေသများ။
မည်သည့် dopaminergic ဦး နှောက်ဒေသများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲကာလအတွင်း sensitivity ကိုဆုချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် SR ရမှတ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အခြေအနေများအတွင်းသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသောတက်ကြွသော dopaminergic ဒေသများ၏ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှုများကိုတွက်ချက်သည်။ စောင့်ကြည့်ရမည့်ကာလအတွက် SR ရမှတ်များနှင့်လက်ဝဲအင်ဆူလာနှင့် OFC လက်ဝဲရှိလှုပ်ရှားမှုများအကြားဆက်စပ်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာမျှော်လင့်နေစဉ်တက်ကြွသောဒေသနှစ်ခု) သည်သိသာမှုမရှိပါ (စားပွဲတင် 2).
SR ရမှတ်များနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှု, အသက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်း။
ရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုကာလအဘို့, erotic ရုပ်ပုံများကို processing စဉ် SR ရမှတ်များနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှုများကိုတွက်ချက်ခဲ့သည် OFC, left insula, medial PFC, right VS, left amygdala နှင့် midbrain ရှိကြားနေရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SR ရမှတ်များအပြုသဘောဘယ်ဘက် OFC အတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်r = .431, p<.05 FWE တညျ့ n = ၄၂; ကြည့်ပါ ပုံ 3a) နှင့် left insula (r = .459, p<.05 FWE တညျ့ n = ၄၂; ကြည့်ပါ ပုံ 3b) ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိမ့်သောစာရင်းအင်းတံခါးခုံကိုအသုံးပြု။ လက်ျာ VS အတွက် SR ရမှတ်များနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားအပြုသဘောဆက်စပ်မှုလေ့လာသည် p<.05 မမှန်ကန်သောr = .315, p<.05 မမှန်ကန်သော n = ၄၂; ကြည့်ပါ ပုံ 3c) ။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 2.
SR ရမှတ်များနှင့်အပြုသဘောဆက်စပ်မှုဖေါ်ပြခြင်း ဦး နှောက်ဒေသများ။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုဖြစ်ရပ် -related စိတ်ခံစားမှုအလုပ်အဆင်ပြေအောင်နှင့်အစာစားချင်စိတ် (ခေါ်ဆောင်သွား) လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှု။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း BAS ၏ ဦး နှောက်areasရိယာများသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်းနှစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ဆောင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် BAS နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်someရိယာအချို့တွင်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လှုပ်ရှားမှုသည်ပိုမိုကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် SR လေ့လာမှုရလဒ်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည် Grey ၏ RST ၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
စိတ်ခံစားမှု Task အတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲ၏အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြည့်ရှုသည့်ကာလနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကာလကိုသီးခြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ anticipatory ကာလခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီသောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် BAS နှင့်ဆက်နွှယ်သောofရိယာများ၏ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုပြင်ခြင်းတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် BAS နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒေသများရှိစိတ်မကောင်းစရာဝေဒနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက erotic cues များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယယူဆချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကမထောက်ပံ့ပါ။ အထူးသကျနော်တို့လက်ဝဲနှစ် ဦး နှစ်ဖက် OFC လက်ဝဲ anterior insula ကစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးတွေကိုတုံ့ပြန်သော်လည်းလက်ဝဲနှစ် ဦး နှစ်ဖက် OFC, ဆုချီးမြှင့်ဖို့တုံ့ပြန်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲ၏လတ်တလောတွက်ချက်မှုမော်ဒယ်များနှစ် ဦး နှစ်ဖက် OFC မကြာသေးမီဆုလာဘ်သမိုင်းတစ်ခု activation-based အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထောက်ခံပါတယ်အဆိုပြုထား ။ Deco and Rolls (၂၀၀၅) မှအဆိုပြုထားသောဆုများမရရှိခဲ့ပါက OFC သည်ဆုလာဘ်စည်းမျဉ်းများကို (စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု - အရေးပေါ်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်သောမျှော်လင့်ချက်များ) encoding လုပ်ရန်အဆိုပြုထားသည်။ ။ ယခင် fMRI လေ့လာမှုများကဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်ကာလအတွင်း OFC ၏ပိုမိုထိရောက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသခဲ့သည် ,  နှင့် cue နှင့်ရလဒ်အကြားအရေးပေါ်သတိထားမိခဲ့ကြသင်တန်းသားများကိုအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကို ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, anterior insula အတွက်လှုပ်ရှားမှုမသေချာမရေရာရလဒ်များမျှော်လင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် , ။ ထို့အပြင်အန္တရာယ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မရေရာဒွိဟပါဝင်ပတ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့် anterior insula တုံ့ပြန်မှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရနှစ် ဦး နှစ်ဖက်တိုကျရိုကျသောerရိယာမြားသညျသန္ဓေတားဆီးခြင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နေသည်၊ စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးတွေကို processing ။ အနာဂတ်သုတေသနကဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုအတည်ပြုသင့်ပါတယ်။
ကြားနေရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ erotic ဓာတ်ပုံများကို processing အတွက်ပါဝင်ပတ်သက် ဦး နှောက်ofရိယာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ occipitotemporal cortex, parietal cortex, VS, amygdala, thalamus, midbrain, ACC, insula, နှစ် ဦး နှစ်ဖက် PFC, OFC နှင့် medial PFC ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကာလအတွင်းဤဒေသများရှိလုပ်ဆောင်မှုကိုသြဒိနိတ်အစိတ်အပိုင်းလေးခုပါ ၀ င်သည့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံများဖြင့်ရှင်းပြထားသည် - သိမြင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒ။ , , ။ ဤမော်ဒယ်များအရ, occipitotemporal, parietal နှင့် orbitofrontal ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ , , , လှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့အားအာရုံစူးစိုက်မှုပေးသောအကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်။ ထို့အပြင် insula, amygdala, rostral ACC နှင့် medial PFC ရှိလှုပ်ရှားမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည် , , , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ် hedonic ခံစားချက်များကို၏ပုဂ္ဂလဒိive္အတွေ့အကြုံ၏အပြောင်းအလဲနဲ့။ ထို့အပြင် rostral ACC နှင့် anterior insula လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ဇီဝကမ္မအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် , တစ် ဦး ချင်းစီအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် endocrinological ပြောင်းလဲမှုများ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် VS၊ thalamus, caudal ACC နှင့် lateral PFC တို့သည်စိတ်ခွန်အားနိုးမှုကိုပေးသည် , , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အပြုအမူကို ဦး တည်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်ရန်တိုက်တွန်းခံရခြင်း။ ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုသည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများသော်လည်း၊ , , , ,  လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် ဦး နှောက်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုတွင်တက်ကြွစွာ ဦး နှောက်နေရာများကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများအကြား ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသောအခြေအနေတွင်နှစ်ဖက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည် ၅၀% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောပုံရိပ်များကိုတုန့်ပြန်မှုအားဖြင့်တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းပြသနိုင်သော်လည်း ၁၀၀% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူများကိုမူပြသခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မပါ ၀ င်သည့်ဆုများရရှိချိန်တွင်ဤဒေသတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်  အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကဲဖြတ်ဖို့ parietal cortex ချိတ်ဆက်နေစဉ် ။ ထို့ကြောင့်ဤလှုပ်ရှားမှုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကဲဖြတ်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေကြိုးကိုင်ခဲ့သည်ရှိရာယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ဆန့်ကျင် -ကျွန်ုပ်တို့သည် VS နှင့် OFC တို့တွင်လှုပ်ရှားမှုများကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ၊ OFC သည်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံအသွင်အပြင်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ကွာခြားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယခင်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောပိုက်ဆံသို့မဟုတ်သာယာသောအရသာအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှုများဖြစ်နိုင်ခြေကို 50% ထက်နိမ့်အလုပ်, ဤ ဦး နှောက်ဒေသများရှိပိုမိုမြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အသွင်အပြင်၏နိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူရလဒ်များအကြားဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည် , ။ ထို့ကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အကျိုးကို၏ 50% ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဤ ဦး နှောက်ဒေသများ၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု generate မှမလုံလောက်လိမ့်မည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အဓိကရလဒ်မှာဆုချီးမြှင့်မှု sensitivity သည် BAS နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်sexualရိယာများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြမှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ တိတိကျကျပြောရလျှင်၊ SR အမှတ်ရသူများများသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေစဉ်ဘယ်ဘက် OFC၊ left insula နှင့် VS တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြကြသည်။ ဆုလာဘ် sensitivity နှင့်လက်ဝဲ OFC လှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆုလာဘ်တန်ဖိုး encoding ကတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အလားအလာရှိသောဆုလာဘ်ရလဒ်များ၏တန်ဖိုးကိုရရှိရန်အတွက် OFC သည်အာရုံခံကိရိယာ၊ ။ ဤareaရိယာသည်လက်ရှိလှုံ့ဆော်မှု၏တန်ဖိုးကိုကုဒ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည် -အပြုအမူ၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်တွင်သူတို့ကိုထားခြင်း , ။ ဤနေရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုအရိပ်လက္ခဏာဆုပေးပွဲတင်ဆက်မှုတွင်ပြသခဲ့သည် လျော့နည်းလှုပ်ရှားမှုဆုလာဘ်တန်ဖိုးပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပြီးသော်လည်း, ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုတွင်မြင့်မားသောဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအားဖြင့်ပြလက်ဝဲ OFC အတွက်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ်တန်ဖိုးသူတို့ရဲ့ attribution ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
လက်ဝဲ insula လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအကြားဆက်ဆံရေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ insula ထိုကဲ့သို့သော interoceptive သတင်းအချက်အလက်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိအမြင်, ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု၏အမြင်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဖြစ် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအများအပြားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် ။ erotic လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်ယခင် fMRI လေ့လာမှုများ erotic လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်အတွင်း insula လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည် , , , , ,  လိင်တံဆွအောက်မှာ  နှင့်လိင်တံ turgidity နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည် , , , ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် interoceptive တုံ့ပြန်မှုစောင့်ကြည့်အတွက် insula ၏ဆိုလိုဆိုလိုနှင့်သတိခံစားမှုအတွက် insula ၏အဆိုပြုထားသောအခန်းကဏ္ with နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်မြင့်မားသောဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား insula လှုပ်ရှားမှုသည်ဤသင်တန်းသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ပိုမိုအားကောင်းအတွေ့အကြုံကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆုလာဘ် sensitivity နှင့်ပါဝင်သူအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်ရန်ပိုမိုမြင့်မားလွယ်ကူစွာထိခိုက်ပြသကြောင်းပြသလေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူသည် .
VS သည် dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်၏သော့ချက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ဆင့်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများကွဲပြားမှုအတွက်အာရုံကြောအလွှာဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည် , , ။ ဤရွေ့ကားတစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုဟာ NAcc ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသောဆုလာဘ် sensitivity ကိုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိ NAcc တွင်ပမာဏလျော့နည်းနေသည် ပိုကျပန်းကျိန်းဝပ် - ပြည်နယ်အာရုံကြောဒိုင်းနမစ် နှင့်ဆုလာဘ် -related လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် -။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သော NAcc ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏လှုံ့ဆော်မှုအစိတ်အပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ။ မဖြစ်စလောက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှု၏ပေမယ့်, ဒီလေ့လာမှုထောက်ခံမှု၏ရလဒ်များကိုမြင့်မားသောဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုမှစွပ်စွဲမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် , , .
ဤရလဒ်များကိုအတူတကွယူခြင်း၊ မြင့်မားသောဆုချီးမြှင့်မှုခံစားချက်ရှိသည့်ပါဝင်သူများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်သည့်နေရာများတွင် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်၊ ဤရလဒ်သည်ဆုချီးမြှင့်မှု sensitivity နှင့်ပိုမိုအားကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသယခင်သုတေသနနှင့်အညီဖြစ်ကြသည် -။ ဤရလဒ်များ၏အခြေခံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း BAS ပုံစံများကကမကထပြုခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနသည်ဤယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကာလခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထူးခြားသောအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုလာဘ်အာရုံခံစားမှုနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတို့အကြားဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ RST ကဆုလာဘ် sensitivity ကိုဂန္ထဝင်နှင့်ဆာပအေးစက် modulates ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဘယ်လိုနေသော်လည်းဂန္ထဝင်အေးစက်အတွက်ဆုကို sensitivity ကို၏အခန်းကဏ္controversကိုအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည် ။ ယခင်ကကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများကဆုလာဘ်ခံစားမှုများမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်အာရုံခံစားမှုနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတို့အကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည် , ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာမှ, အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုဆက်စပ်အလုပ်များကိုအတွက် anticipatory ကာလအတွင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်နွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုအနည်းဆုံးဆုလာဘ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုတင်ပြသည့်အခါ, ဆက်စပ်အေးစက်အတွက်ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့် modulates ငါတို့အယူအဆကိုထောကျပံ့ပေးပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီရလဒ်နှင့်ပတ်သက်။ အများအပြားကိစ္စများထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ RST ရှိ Pavlovian အသင်းအဖွဲ့များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ Corr ၏ (၂၀၀၁) အငြင်းပွားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖြစ်သည် , ဒီလေ့လာမှု၏ anticipatory cue ဒုတိယအဆင့်အသင်းအဖွဲ့အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းငှါ, ထိုခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုပါလိမ့်မယ်အရာ, သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဟုတ်ကတည်းက။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ဂန္ထဝင်အေးစက်မှုမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တန်းသားများသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အလို့ငှာတစ်ခုစီပြီးနောက်နှင့်ရုပ်ပုံတစ်ခုစီပြီးနောက်တုန့်ပြန်ရန်ပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဖြစ်အပျက် -related ပါရာဒိုင်းအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကတည်းကကျနော်တို့ Pavlovian အေးစက်လေ့လာဖို့ပceivedိသန္ဓေယူမဟုတ်သောယခင်လေ့လာမှုများကနေအလုပ်အဆင်ပြေအောင်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုတိကျသောပါရာဒိုင်းတစ်ခုကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်အနာဂတ်သုတေသနသည်တွဲဖက်လေ့လာသင်ယူမှုကာလအတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတွင်ဆုလာဘ်အာရုံခံစားမှု၏အခန်းကဏ္disကိုဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမပြုမီကန့်သတ်ချက်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဦး ဆုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတည်ပြုရန်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (ဆိုလိုသည်မှာ penile turgidity သို့မဟုတ် heart rate) ၏ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအတိုင်းအတာကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယခင်တွေ့ရှိချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမြင်အာရုံလိင်လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် , , , ။ ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာမှုကိုလိင်ကွဲယောက်ျားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်အမျိုးသမီးများမပါဝင်ပါ  နှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရို ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအမျိုးသားများအတွက်သာယေဘူယျအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့်ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားသည့်အချက်များသည်တစ် ဦး ချင်း၏အတွေ့အကြုံများအပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာမရေရာမှု၏သင်္ကေတအဖြစ်“?”) ။ ဤရွေ့ကားတွေကိုရည်ညွှန်း၏ပါရာဒိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည် ။ သို့ရာတွင်၊ ဤပြproblemနာကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းမှာအနာဂတ်တွင်လေ့လာမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောမည်သည့် semantic connotation (ဥပမာ fractal ပုံများ) မပါဝင်ဘဲပါဝင်သူများအကြားအချက်အလက်များကိုကျပန်းရွေးခြင်းသို့မဟုတ်အချက်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောခေါ်ဆောင်သွားသောခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများသည် valence နှင့် arousal တို့၏ကြားနေပုံများနှင့်ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုသည်မည်သည့်အချက်များကလေ့လာတွေ့ရှိထားသည့်ရလဒ်များကိုမောင်းနှင်နေသည်ကိုမပြောပါ။ ထို့ကြောင့်, erotic လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် valence, နှိုးဆွခြင်းနှင့် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအကြားဆက်ဆံရေးအနာဂတ်သုတေသနအတွက်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြထားသောကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာမမှန်မှုများအပေါ်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အမျိုးသမီးများ၏ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏ဖြစ်နိုင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဤလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် BAS နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်areasရိယာများသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့် ဦး နှောက် activation အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်။ ကွာဟမှုကိုဖြည့်စွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဤဒေသများရှိ ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤသုတေသနကို CONSOLIDER-INGENIO 2010 အစီအစဉ် (CSD2007-00012) ၏ Brainglot စီမံကိန်းမှထောက်ခံခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စီမံကိန်းအား MINECO မှ PSI2010-20168၊ P1 • 1B2011-09 မှ Universitat Jaume I နှင့် FEPAD မှ CA သို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး၊ စပိန်အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးမဟာဗျူဟာ Ministerio de Sanidad y Consumo၊ GV / 4623/2011 မှ ၄၆၂၃/၂၀၁၁ မှထောက်ပံ့သည်။ Universitat Jaume I မှ ABL သို့ GeneralitatValenciana နှင့် P2012-042A1-1 ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်လေ့လာမှုပုံစံ၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
1. Grey JA (1970) introversion-extraversion ၏ psychophysiological အခြေခံ။ အပြုအမူသုတေသနနှင့် Therafy 8: 249-266 [PubMed]
2. Grey JA၊ McNaughton N (၂၀၀၀) စိုးရိမ်စိတ်၏ Neuropsychology: Septo-Hippocampal စနစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ အောက်စဖို့ဒ်: အောက်စ်ဖို့ဒ်စာနယ်ဇင်း။
3. Pickering အေဒီ၊ Grey JA (၁၉၉၉) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အာရုံကြောသိပ္ပံ။ In: အယ်ဒီတာများ Pervin L၊ John O ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏လက်စွဲစာအုပ် (1999nd ထုတ်ဝေ) ။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း။ 2-277 ။
4. Haber SN, Knutson B (2010) Reward Circuit: မူလခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ကိုချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ Neuropsychopharmacology 35: 4-26 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5. Ikemoto S (2007) Dopamine ဆုိုင်ရာတိုက်နယ် - ventral midbrain မှနျူကလိယ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေးသောအထိပရိုဂျက်တာစနစ် ၂ ခု။ ဦး နှောက် Res ဗြာ 56 ​​(1): 27-78 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6. Ávila C, Torrubia R (2008) စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အေးစက်မှုလေ့လာမှုများ။ ခုနှစ်တွင်: Corr P ကို, အယ်ဒီတာများ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အားဖြည့် sensitivity ကိုသီအိုရီ။ လန်ဒန်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း။ 228-60 ။
7. Corr PJ (2004) Reinforcement sensitivity သီအိုရီနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ Neurosci Biobehav Rev 28: 317-332 [PubMed]
၈။ Beaver JD၊ Lawrence အေဒီ၊ ဗန် Ditzhuijzen J၊ Davis MH, Woods A, et al ။ (8) ဆုလာဘ် drive ကိုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအစားအစာပုံရိပ်တွေမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ J ကို Neurosci 2006: 26-5160 [PubMed]
၉။ Cámara E, Rodríguez-Fornells A, Münte TF (9) Microstructural ဦး နှောက်ကွဲပြားမှုသည်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ hemodynamic တုန့်ပြန်မှုများကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ J ကို Neurosci 2010: 30-11398 [PubMed]
၁၀။ Carter R၊ MacInnes J, Huettel S, Adcock R (10) VTA နှင့် Nucleus တွင်ပါဝင်မှုသည်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်များတိုးပွားလာသည်။ ရှေ့ Behav Neurosci 2009: 3. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 11. Hahn T က, Dresler T က, Ehlis AC အ, Plichta MM, Heinzel S က။ (2009) မျှော်လင့်ချက်ဆုချရန်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု Grey ကထကြွလွယ်သောအားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ NeuroImage 46: 1148-53 [PubMed]
12. Aluja A, Torrubia R (2004) အမျိုးသားများတွင်ရန်လိုမုန်းတီးခြင်း၊ Neuropsychobiology 50: 102-7 [PubMed]
၁၃။ Aluja A၊ Garcia LF (၂၀၀၅) အကျဉ်းသားများ၌အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာသိလိုစိတ်နှင့် testosterone ဟော်မုန်း။ Neuropsychobiology 13 (2005): 51-1 [PubMed]
၁၄။ လက်သမား KM၊ Andersen BL, Fowler JM, Maxwell GL (14) လိင်ကိစ္စနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအကန့်အသတ်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရမှတ်များ - ကျား၊ မတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ။ J ကိုလိင် Res 2008: 45-36 [PubMed]
15. Kantorowitz DA (1978) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် tumescence နှင့် detumescence ၏အေးစက်။ Behav Res Ther 16 (2): 117-23 [PubMed]
16. Voigt DC, Dillarda JP, Braddocka KH, Anderson JW, Soporyc P (2009) Carver နှင့် White ၏ (၁၉၉၄) BIS / BAS စကေးများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောကျန်းမာရေးအပြုအမူများနှင့်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှု။ Pers Individ Dif 1994: 47-89
၁၇။ Zuckerman M, Litle P (17) ။ ရောဂါနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သိလိုစိတ်။ Pers Indiv ကွဲပြား 1986: 7-49
18. Rolls ET (1999) ဦး နှောက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့ဒ်စာနယ်ဇင်း။ ၃၆၇ စ။
၁၉။ Stoléru S, Fonteille V, Cornélis C, Joyal C, Moulier V (၂၀၁၂) ကျန်းမာသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့တွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်ကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုလေ့လာခြင်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ။ Neurosci Biobehav Rev 19 (2012): 36-6 [PubMed]
20. Kühn S က, Gallinat J ကို (2011) cue- သွေးဆောင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအပေါ်တစ် ဦး ကအရေအတွက် Meta-analysis သည်။ J ကိုလိင် Med 8 (8): 2269-75 [PubMed]
21. Klucken T က, Schweckendiek J ကို, Merz ကို C, Tabbert K ကို Walter B, ။ (2009) အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ဝယ်ယူ၏အာရုံကြော activation: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J Sex Med ။ 6: 3071-3075 [PubMed]
22. Mackiewicz KL, Sarinopoulos ငါ Cleven KL, Nitschke JB (2006) မျှော်လင့်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ amygdala နှင့် hippocampus function ကိုများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏တိကျသော။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 103 (38): 14200-5 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23. Torrubia R, Avila C, Molto J, Caseras X (2001) Grey ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေဖြင့်မေးခွန်းလွှာဆုကိုပေးအပ်ရန်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်အာရုံခံစားလွယ်ခြင်း (SPSRQ) ။ Pers Individ Dif 31: 837-862
24. Barrós-Loscertales A, Meseguer V, Sanjuán A, Belloch V, Parcet MA စသည်တို့။ တစ် ဦး overactive အပြုအမူ activation စနစ်နှင့်အတူယောက်ျားအတွက် Striatum မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှော့ချရေး။ Eur J ကို Neurosc 2006: 24-2071 [PubMed]
25. Barrós-Loscertales A, Ventura-Campos N, Sanjuán-Tomás A, Belloch V, Parcet MA, et al ။ appetitive နှင့် aversive လှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း ဦး နှောက်ကို activation အပေါ်အပြုအမူ activation system ကိုမော်ဂျူ။ Soc Cogn သည် Neurosci ၅ ကိုထိခိုက်သည်။PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26. Caseras X, Avila C, Torrubia R (2003) အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုစနစ်များတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ၏တိုင်းတာမှု - ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြေးခွံများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ Pers Individ Dif 34: 999-1013
27. Walter M, Matthiä C, Wiebking C, Rotte M, Tempelmann C ။ (2009) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် dorsomedial prefrontal cortex preceding: ဒိုမိန်းမှီခိုနှိုင်းယှဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိကျတဲ့။ Hum ဦး နှောက် Mapp 30, (1): 312-26 [PubMed]
et al 28. Windmann S, Kirsch P ကို, Mier: D, Stark R ကို, Walter B ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်သက်ရောက်မှုဘောင်တွင် (2006) တွင်: ရွေးချယ်မှုရလဒ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့မှ medial orbitofrontal cortex activation နှိုင်းယှဉ်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်။ J ကို Cogn Neurosci 18 (7): 1198-211 [PubMed]
29. Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN (1999) International affive picture system (IAPS): ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။ နည်းပညာအစီရင်ခံစာ A-4၊ စိတ်ပညာစိတ်ပညာသုတေသနဌာန၊ ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်။
30. Moltó J, Montañés S, Poy R, Segarra P, Pastor MC, et al ။ (၁၉၉၉) နူနိုဗိုဒေသရှိစံသတ်မှတ်ချက်များကိုစမ်းသပ်လေ့လာခြင်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (IAPS) ။ Adaptaciónespañola။ Rev Psicol ဗိုလ်ချုပ် Apl 1999 (52): 1-55
၃၁။ Redouté J, Stoléru S, Grégoire M, Costes N, Cinotti L ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (31) ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum Brain Mapp 2000: ၁၆၂-၁၇၇ [PubMed]
32. Moulier V, Mouras H, Pélégrini-Issac M, Glutron D, Rouxel R, et al ။ လူ့အထီးအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲလှုံ့ဆော်မှုများက evoked penile စိုက်ထူ၏ Neuroanatomical ဆက်စပ်မှု။ Neuroimage 2006: 33-689 [PubMed]
et al 33. အာရုန်ငါ, Etcoff N ကို, Ariely: D, Chabris CF, O'Connor အီး။ fMRI နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများ - လှပသောမျက်နှာများသည်ဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Neuron 2001 (32): 3-537 [PubMed]
34. Spicer KR, Platek SM (၂၀၁၀) အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အာရုံကြောဆုချခြင်းစင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Commun Integr Biol 2010 (3): 3-282 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35. Krendl AC, Macrae CN, Kelley WM, Fugelsang JA, Heatherton TF (2006) ကောင်း၊ ဆိုးသည်နှင့်ရုပ်ဆိုး: အမည်းစက်၏အလုပ်လုပ်နေသောခန္ဓာဗေဒဆက်စပ်မှုတစ်ခု fMRI ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ Soc Neurosci 1 (၁): ၅-၁၅ [PubMed]
et al 36. Friston KJ, ကေတီဟုမ်း AP, Worsley KJ, Poline JP, Frith CD ကို။ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်ထဲမှာ (1995) စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: ယေဘုယျ linear ချဉ်းကပ်မှု။ Hum ဦး နှောက် Mapp 2: 189-210
et al 37. Grey က JR, Burgess GC, Schaefer တစ် ဦး က, Yarkoni T က, Larsen RJ ။ (2005) အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ထိရောက်မှုအတွက်ထိရောက်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွဲပြားခြားနားမှု fMRI သုံးပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်။ Neurosci5(2) သည် Cogn အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည် - ၁၈၂-၉၀ [PubMed]
et al 38. ရှိမုန် JJ, Walther S, Fiebach CJ, Friederich HC, Stippich C ။ (2009) အာရုံကြောဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ချဉ်းကပ် - ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 49 (2): 1868-74 [PubMed]
neurobiology: 39. Oades RD, Halliday GM က (1987) Ventral tegmental (A10) စနစ်။ ၁။ ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆက်သွယ်မှု။ Brain Res Rev 1: 12-117PubMed]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်း dopamine system လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုများအတွက် 40. Wahlstrom: D, White T, Luciana M (2010) Neurobehavioral အထောက်အထား။ Neurosci Biobehav Rev 34 (5): 631-48 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41. Eppinger B, Hämmerer D, Li SC (2011) လူ့အိုမင်းမှုအတွက်ဆုလာဘ်အခြေပြုသင်ယူခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ Neuromodulation ။ အန်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1235: 1-17 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pauli WM, Hazy TE, O'Reilly RC (42) မျှော်လင့်ချက်၊ မရေရာမှုများနှင့်အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် - Orbital frontal cortex နှင့် amygdala တို့၏ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ချက်အပြောင်းအလဲအတွက်သီးခြားနှင့်ဖြည့်စွက်အခန်းကဏ္။ ။ J ကို Cogn Neurosci 2012 (24): 2-351 [PubMed]
Orbitofrontal cortex တွင်ဆုလာဘ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းကိုအခြေခံသော ၄၃. Deco G၊ Rolls ET (43) Synaptic နှင့်ထူးခြားသောအချက်များ။ Cereb Cortex 2005 (15): 1-15 [PubMed]
လူသားများတွင် Gottfried JA၊ O'Doherty J၊ Dolan RJ (၂၀၀၂) ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အား အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့သည်။ J ကို Neurosci 44: 2002-22 [PubMed]
အဓိကအရသာဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်နေစဉ် 45. O'Doherty JP, Deichmann R, Critchley HD, Dolan RJ (2002) အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Neuron 33: 815-826 [PubMed]
46. ​​Knutson B, Greer SM (2008) မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု - အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများနှင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးဆက်များ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ 363 (1511): 3771-86 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47. Volz KG, Schubotz RI, von Cramon DY (2004) ဘာကြောင့်ငါမသေချာတာလဲ fMRI မှခွဲထုတ်ထားသည့်မသေချာမရေရာမှု၏အတွင်းနှင့်ပြင်ပဂုဏ်သတ္တိများ။ NeuroImage 21: 848-857PubMed]
စွန့်စားမှုနှင့်မရေရာဒွိဟအတွက်စီးပွားရေး ဦး စားပေးများ၏ Huuralel SA, Stowe CJ, Gordon EM, Warner BT, Platt ML (48) ။ Neuron 2006: 49-765 [PubMed]
49. Stoléru S, Grégoire M, Gérard D, Decety J, Lafarge E, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ (1999) Neuroanatomical ဆက်စပ်။ Arch လိင် Behav 28: 1-21 [PubMed]
50. Bühler M, Vollstädt-Klein S, Klemen J, Smolka M (2008) ခေါ်ဆောင်သွားသောလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြမှုပုံစံသည် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော vs. ပိတ်ထားသော fMRI ဒီဇိုင်းများ။ Behav ဦး နှောက် Funct 4: 30-40 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51. Karama S, Lecours A, Leroux J, Bourgouin P, Beaudoin G, et al ။ erotic ရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်၏ကြည့်ရှုစဉ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက် ဦး နှောက်ကို activation ၏ (2002) ဒေသများ။ Hum ဦး နှောက် Mapp 16: 1-13 [PubMed]
et al 52. Jarcho JM, Benson BE, Plate RC, Guyer AE, Detloff AM ။ ဆုချီးမြှင့်ဖို့ sensitivity ကိုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ (2012) ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Dev Cogn Neurosci2(4): 437-47 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53. Ernst M, Paulus အမတ် (2005) ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Neurobiology: တစ် ဦး neurocognitive နှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့်ကနေရွေးချယ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 58 (8): 597-604 [PubMed]
ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု linear function ကိုအဖြစ် 54 Abler B, Walter H ကို, Erk S က, Kammerer H ကို, Spitzer M (2006) ခန့်မှန်းအမှားလူ့နျူကလိယ accumbens အတွက် coded ဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 31: 790-795 [PubMed]
55. O'Doherty JP, Dayan P, Friston K, Critchley H, Dolan RJ (2003) ယာယီခြားနားချက်ပုံစံများနှင့်လူ့ ဦး နှောက်တွင်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောသင်ယူမှု။ Neuron 38: 329-337 [PubMed]
et al 56. Spicer J ကို, Galvan တစ် ဦး က, Hare က TA, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G ။ (2007) နျူကလိယ၏ sensitivity ကိုဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်အတွက်ချိုးဖောက်မှုများမှ accumbens ။ Neuroimage 34 (1): 455-61 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57. Wallis JD (2007) Orbitofrontal cortex နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Annu ဗြာ Neurosci 30: 31-56 [PubMed]
58. McClure SM, York MK, Montague PR (2004) လူသားများ၌ဆုလာဘ်ပြုပြင်ခြင်း၏အာရုံကြောအလွှာများ - FMRI ၏ခေတ်သစ်အခန်းကဏ္။ ။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် 10 (3): 260-8 [PubMed]
59. O'Doherty JP (2004) လူ့ ဦး နှောက်တွင်ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောသင်ယူခြင်း။ neuroimaging မှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ Curr အမြင် Neurobiol 14 (6): 769-76 [PubMed]
60. Rolls ET, Grabenhorst F (2008) Orbitofrontal cortex နှင့်ကျော်လွန်သော - အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအထိ။ Prog Neurobiol 86 (3): 216-44 [PubMed]
61. Sescousse, G, Redouté J, Dreher JC (2010) လူ့ orbitofrontal cortex တွင်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကုဒ်၏ဗိသုကာ။ J ကို Neurosci 30: 13095-13104 [PubMed]
လူ့ဂမိနှင့် Orbitofrontal cortex အတွက်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်တန်ဖိုး encoding က 62 Gottfried JA, O'Doherty J, Dolan RJ (2003) ။ သိပ္ပံ 301: 1104-1107 [PubMed]
၆၃ Craig အေဒီ (၂၀၀၉) သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း။ အဆိုပါအတွင်းပိုင်း insula နှင့်လူ့အသိအမြင်။ နတ်ဗြာ Neurosci 63 (2009): 10-1 [PubMed]
64. Georgiadis J, လိင်တံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်နေစဉ်အတွင်း Holstege, G (2005) လူ့ ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေ။ J ကို Comp Neurol 493: 33-38 [PubMed]
65. Arnow B, Desmond J, Banner L, Glover, G, Solomon A, et al ။ (2002) ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက် 125: 1014-1023 [PubMed]
66. Mouras H, Stoléru S, Moulier V, Pélégrini-Issac M, Rouxel R, et al ။ တစ် ဦး fMRI လေ့လာမှု: ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုကလစ်များကမှန် - အာရုံခံဆဲလ်စနစ်၏ (2008) activation သွေးဆောင်စိုက်ထူ၏ဒီဂရီခန့်မှန်းပါတယ်။ Neuroimage 42: 1142-1150 [PubMed]
67. Zelenski JM, Larsen RJ (1999) အကျိုးသက်ရောက်ရန်လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်ခြင်း - ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာ taxonomies သုံးခုကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ J ကို Pers 67 (5): 761-91 [PubMed]
68. DePue RA, Collins PF (၁၉၉၉) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ Neurobiology: dopamine, မက်လုံးပေးမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းနှင့် extraversion ။ Behav ဦး နှောက်သိပ္ပံ 1999: 22-491 [PubMed]
69. Pickering AD, Grey JA (2001) Dopamine၊ အစာစားချင်စိတ်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လူ့သင်ယူမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာ - တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုချဉ်းကပ်မှု။ In: အယ်လီယာဇ်အေ၊ Angleitner A၊ အယ်ဒီတာများ။ တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုသုတေသနတိုးတက်မှု။ Lengerich: PABST သိပ္ပံထုတ်ဝေသူများ။ 113-149 ။
70. Hahn T, Dresler T, Ehlis AC, Pyka M, Saathoff C ။ (2012) ကျိန်းဝပ် - ပြည်နယ် ဦး နှောက်လှို၏ကျပန်း Gray ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရို။ NeuroImage 59: 1842-1845PubMed]
71 Matthews, G, Gilliland K (1999) HJ Eysenck နှင့် JA Grey တို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသီအိုရီများ - နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်။ Pers Individ Dif 26: 583-626
72. Corr PJ (2001) JA Grey ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသီအိုရီတွင်စမ်းသပ်မှုပြTestနာများ - Matthews နှင့် Gilliland အပေါ်သုံးသပ်ချက် (1999) ။ Pers Individ Dif 30: 333-352